Myanmar Deitta | Photobook Editing, Sequencing and Design
The Angus McDonald Scholarship
A collaboration between Myanmar Deitta and the Goethe Institut Myanmar, led by Calin Kruse.
In this workshop, it is this life and afterlife that we will be concerned with. This workshop is about the creation of photobooks on the one hand, as well as about rethinking your work in the context ofaphotobook on the other hand. Calin will work closely with the participants in the production and presentation ofabook from their own photo projects over the course of four days, focusing on design, editing, sequencing and the importance of materials in the production of photobooks.
ဓါတ်ပုံဆရာများအဖို့ ဓါတ်ပုံများဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းသည် မိမိပြောလိုသော ဇာတ်လမ်းအတွက် ပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါသည်။ တကယ်တော့ ဓါတ်ပုံများရုိုက်ပြီး မိမိ၏ ကင်မရာကို လက်ထဲကချလိုိုက်တဲ့ အခိုက်အတံ့သည် ဓါတ်ပုံဆရာများ အတွက် ဓါတ်ပုံရိုက်ခြင်းထက် ပိုမိုကြီးမားသော စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ပင်ဖြစ်နေတော့သည်။ ဓါတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်အနေနှင့် မိမိရိုက်ကူးသည့် ဓါတ်ပုံဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာကို အပြည့်အဝဖေါ်ပြနိုင်ရန် ဓါတ်ပုံရိုက်ခြင်းအပြင် ပြန်လည်ဆင်ခြင်သုံးသပ်၊ ဖွင့်ဟပြောပြကာ နှင့် ရေးသားတတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ယခု အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ကျွနု်ပ်တို့ ဓါတ်ပုံဆရာတိုင်း ကြုံတွေ့ရမည့် ထိုအခြင်းအရာများကို ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့် ယခု အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှ ဓါတ်ပုံစာအုပ် ဖန်တီးခြင်း အတတ်ပညာကို အဓိက ဆွေးနွေးသွားမှာ ဖြစ်ပြီး တစ်နည်းအားဖြင့် ဓါတ်ပုံဆရာများအနေဖြင့် မိမိရိုက်ကူးထားသော ဓါတ်ပုံဇတ်လမ်းကို ဓါတ်ပုံစာအုပ်တစ်အုပ်အနေဖြင့် ဖန်တီးရန် ပန်လည်စဉ်းစားသုံးသပ်ကြရမှာ ဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ ၄ရက်ကြာမြင့်မည် ဖြစ်ပြီး စာအုပ်ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း၊တည်းဖြတ်ခြင်း၊ဓါတ်ပုံစီခြင်း နှင့် ဓါတ်ပုံစာအုပ်ဖန်တီးခြင်းအတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းများ၏ အရေးပါပုံတို့ ကို အလေးပေးသင်ကြားသွားမည်ဖြစ်ပြီး သင်တန်းဆရာ Calin Kruse အနေဖြင့် ပါဝင်ဖန်တီးသူ ဓါတ်ပုံဆရာများ နှင့် အနီးကပ်ဆွေးနွေးပြီး ဓါတ်ပုံဆရာများ ကိုယ်တိုင် ကူးထားသော ဓါတ်ပုံပရောဂျက်များကို ဓါတ်ပုံစာအုပ်အဖြစ်ဖန်တီးနိုင်ရန် ကူညီပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
Calin Kruse studied Graphic-Design. He is the founder and maker of the photo magazine dienacht and of dienacht Publishing, and isaphotographer by himself. Calin is alsoacurator, holds guest talks, lectures, makes workshops (Vienna/Austria, Berlin/Germany, Leipzig/Germany, Lagos/Nigeria, Georgetown/Malaysia, Moscow/Russia, Istanbul/Turkey, …) on photobook design and reviews portfolios.
Calin Kruse သည် ပညာကို ဆည်းပူးခဲ့ပြီး ဓါတ်ပုံဆရာတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါသည်။ dienacht ဓါတ်ပုံမဂ္ဂဇင်း ဖန်းတီးသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး dienacht ပုံနှိပ်တိုက်ကို ဖန်တီးထူထောင်သူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် Calin သည် curator တစ်ဦးဖြစ်ပြီး (Vienna/Austria, Berlin/Germany, Leipzig/Germany, Lagos/Nigeria, Georgetown/Malaysia, Moscow/Russia, Istanbul/Turkey အစရှိသော နိုင်ငံများတွင် ) ဓါတ်ပုံစာအုပ်ဖန်တီးခြင်း နှင့် ပတ်သတ်သော ဟောပြောပွဲများ၊ သင်တန်းပို့ချမှုများ နှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများတွင် တက်ကြွစွာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီး portfolios များစွာကိုလည် ဝေဖန်အကြံပေးခဲ့သည်။
dienacht ဓါတ်ပုံမဂ္ဂဇင်း and dienacht ပုံနှိပ်တုိုက်မှ ဖြန့်ချီထုတ်ဝေသော စာအုပ်အများအတွက် (Best German Photobook Awards, Best Books of the Year, Shortlist at the Paris Photo – Aperture Award,arange of LeadAwards.အစရှိသော) ဆုပေါင်းမြောက်များစွာလည်း ရရှိခဲ့ပါသည်။
The workshop is open to photographers from Myanmar who haveasingle body of work which includes at least 30 images (more images is preferable).
Applicants must sendabrief introduction to yourself and your work, andacontact sheet showing at least 20 images from the body of work you wish to make intoabook.
Please send your application to workshops@deitta.org with the subject line “PHOTOBOOK WORKSHOP”
ဓါတ်ပုံစာအုပ်တစ်အုပ် ဖန်တီးခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဓါတ်ပုံဆရာများ လျှောက်ထားနိုင်ပြီး လျှောက်ထားသူဓါတ်ပုံဆရာများ အနေဖြင့် ဓါတ်ပုံဇာတ်လမ်းလက်ရာ တစ်ခုတည်းမှ ဖြစ်သော အနည်းဆုံးဓါတ်ပုံ ၃၀ (ပိုများလျင်ပိုကောင်းသည်) ရှိရမည်ဖြစ်သည်။
လျှောက်ထားသူများအနေဖြင့် မိမိအကြောင်း နှင့် လျှောက်ထားမည့် မိမိရိုက်ကူးထားသော ဓါတ်ပုံပရောဂျက်အကြောင်း မိတ်ဆက်ရေးသားရမည်ဖြစ်ပြီး မိမိဖန်တီးလိုသည့် ဓါတ်ပုံစာအုပ်တွင် ထည့်သွင်းရန် ရည်ရွယ်ထားသော ဓါတ်ပုံ၂၀ ပါဝင်သည့် contact sheet ဖြင့် လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။
လိုအပ်​ချက်​များ ပြည့်​စုံပါက “PHOTOBOOK WORKSHOP" အမည်ဖြင့် ​​workshops@deitta.org သို့လိမ့်မူပြီး ​လျောက်​ထားနိုင်​ပါသည်​။